Suuraalee Afrikaa dadansaa torban kanaa: Mudde 1 -7 2017 - BBC News Afaan Oromoo
Suuraalee Afrikaa dadansaa torban kanaa: Mudde 1 -7 2017
Filannoo suuraalee babbareedoo Afriikaa fi lammiilee Afriikaa ardiiwwan biroo keessaa dabalatee, kan torban kanaa
Goodayyaa suuraa Kan jalqabnu ofee (selfie) magaalaa guddoo Naayijeeriyaa, Abujaatti ka'aa jiruuni. Dubartoonni gaafa Kibxataa dubartoota aangeessuun itti caale ha cimu jechuun hirira bahan.
Goodayyaa suuraa Guyyaa itti aanu, lammiin Koongoo-Biraazaaviil Fiifii Lukuulaan, Meeksikootti chaampiyoonaa Addunyaa ulfaatina kaasuu qaama miidhamtootaa irratti dorgomte.
Goodayyaa suuraa Dubartiin Kaameroon Vanessa Djiepmou Medibe Chaampiyoonaa Kubbaa Harkaa Dubartootaa Addunyaa Jarmanitti qophaa'e irratti, wayita taphattoota Nezarlaandis waliin morkattu.
Goodayyaa suuraa Shubbistuun biyya Seneegaal gaafa Kamisaa, baniinsa dirree xayyaaraa idiladdunyaa Daakaaritti irratti wayita taphattu.
Goodayyaa suuraa Muuziqaa aadaa Buubuu jedhamuun beekame kan weellisu, artistiin Siyeraa Liwon Jaankaa Naabaay, Festivaala Magaalaa Faransaay, Reneetti,suuraa kahuuf qophaa'e- kunis Roobii ture.
Goodayyaa suuraa Guyyaadhuma kana lammiileen Aljeeriyaa, Magaalaa Aljiyers keessa jiraatan, pireezidaantii Faransaay daawwachuuf foddaa irraa gadi ilaalaa turan...
Goodayyaa suuraa Imaanu'el Maakroonif daawwannaa isa jalqabaati. Aljeeriyaan koloneessituu Faransaay irraa bilisummaa argachuuf waraana hadheessaa gaggeessite.
Goodayyaa suuraa Gaafa Kamisaa ammoo, Tuuniziyaatti Pireezidaantii Ameerikaa Donaald Traamp mormuun, alaabaa US guban. Sababni isaas pireezidaantichi Yerusaalem magaalaa guddoo Israa'el erga jedhaniin booda.
Goodayyaa suuraa Gaafa Sambataa ammoo godaantonni paarlaamaa Giriik fuuldura, Ateensitti argamutti - baqattoonni Afriikaa Liibiyaatti gurguramuu morman...
Goodayyaa suuraa Kibxata - Haati gara Awuroppaa cehuuf yaalii taasiftee Liibiyaatti hafte, gara biyyashee Naayijeeriyaatti erga deebitee suuraa kana kaate.
Goodayyaa suuraa Guyyuma sana, ijoolleen mooraa UN magaalaa guddoo, Jubaatti argaman, fakkii Pireezidantii Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir wayita kaasan.
Goodayyaa suuraa Suuraan qomaa ol Emersan Mnaangaagwaa Masaraa Biyyaalessaa Zimbaabwetti fannifame. Kunis kan ta'e pireezidaantii haaraa biyyattii ta'uun kakuu erga raawwatanii guyyoota 10'niin booda.
Goodayyaa suuraa Daa'imni tokko wayita masaraa dulloome hoogganaa duraanii Zaayer, biyya wayita ammaa Rippabliika Deemokraatawaa Koongoo jedhamtu - Mobuutuu Sesee Seekoo keessa wayita deemtu - Dilbata.
Goodayyaa suuraa Guyyuma kan, addeessi guddichi (supermoon) Tulluu Teebil Maawunteen jedhamu gubbaatti mullatte. Tulluun kunis Keepp Taawon, Afriikaa Kibbaatti argama.
Goodayyaa suuraa Qopheessituun waltajjii Torban Faashinaa Siwaahilii, magaalaa guddoo Taanzaaniyaa, Daar es Salaamitti wayita bilbilashee ilaaltu - Sambata Duraa...
Goodayyaa suuraa Waltajjiin kunis waggaa waggaan kan qophaa'u wayita ta'u, faashina biyyoota Afaan Siwaahilii haasa'anii Bahaa fi Giddugala Afriikaaa kan beeksisudha.
Goodayyaa suuraa Modeelonni dhiiraa kunneen, kalaqa kanneen akka amartii funyaan irra kaa'amu godhatanii dhufaniiru. Dizaayinni kun lammii Zaanzibaar, Faaruq Abdallaa jedhamun kan dhihaatedha.
Goodayyaa suuraa Giiftiin Ingiliiz Elsaabet, UKtti ambaasaadara Naayijeeriyaa Joorj Adesolaa Oguntaadee fi haadha warraa isaanii nagaa fuudhan. Kunis kan ta'e, guyyaa Roobii Masaraa Baakingahaamitti.
Suuraalee kanneef galannisaa AFP, EPA fi Reuters